Smartwatches sy ny lainga momba ny fifandraisan'izy ireo amin'ny homamiadana | Vaovao IPhone
Rehefa mieritreritra ianao fa nahita ny zava-drehetra dia misy olona tonga foana ary gaga anao. Ary rehefa io "olona" io dia tsy misy hafa ary tsy ambany noho ny New York Times, gazety iray izay nandrombaka ny loka Pulitzer mihoatra ny zato mahery, ny tsy ampoizina (sy ny fahadisoam-panantenana) no renivohitra. Ny tiako holazaina dia lahatsoratra navoakan'i Nick Bilton omaly tao amin'ilay gazety izay ny smartwatches dia nampitovina tamin'ny paraky. Eny, ilay mpanoratra voalaza etsy ambony dia miresaka ao amin'ny lahatsorany momba ny mety hahatonga ny famantaranandro marani-tsaina sy ny akanjo anaovana amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny mety hiteraka homamiadana.
Tamin'ny 1946, nisy fanentanana dokam-barotra vaovao nipoitra tao amin'ny gazety misy sarin'ny dokotera manao palitao fotsy mitazona sigara sy ilay andian-teny hoe "Ny ankamaroan'ny dokotera mifoka rameva." Tsia, tsy sangisangy izany. Tamin'izany fotoana izany dia mbola tsy nahalala ny dokotera fa ny paraky dia mety hiteraka homamiadana, aretim-po ary havokavoka. Toy izany koa, ny mpikaroka sy ny mpanjifa sasany dia manontany tena raha ho azo heverina fa manimba ny fahasalamana ny akanjo azo ampiasaina (fitaovana azo ampitaina) afaka taona vitsivitsy.
Nandritra ny taona maro dia nisy resaka momba ny fifandraisana misy amin'ny telefaona finday sy fitaovana elektronika maro hafa izay ampiasaintsika isan'andro miaraka amin'ny homamiadana sy aretina hafa. Nandritra ny taona maro ny fanadihadiana dia tanterahina amin'ireo fifandraisana mety misy ireo nefa tsy afaka mahita na inona na inona. Raha ny tena izy, ny lahatsoratra dia miresaka momba ny fanadihadiana nataon'ny World Health Organization (WHO) na ny CDC any Etazonia izay nanondroany fotsiny fa tsy ampy ny porofo hamantarana raha manimba na tsia ny fampiasana finday, ary farafaharatsiny mety atahorany ny manome tolo-kevitra tsy mazava toa ny "ny lavitra ny fitaovana iray dia avy any an-doha no tsara kokoa", toy ny hoe ny loha no hany toerana ao amin'ny vatana ahafahan'ny homamiadana mivoatra.
Toy ny The saika namoaka ho valin'ity lahatsoratra mampalahelo ao amin'ny New York Times ity, ny mololo farany dia nitranga rehefa niresaka ho manam-pahefana momba ny lohahevitra Dr. Joseph Mercola, izay nofaritany ho "manam-pahaizana manokana momba ny fitsaboana", izay manana pejy web momba ny mivarotra vokatra hômeôpatika ary efa nampitandremana matetika ny FDA (Fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina amerikana) noho ny tsy fanoratany anarana ny sasany amin'ireo vokatra na mampanantena miaraka amin'izy ireo ny valiny izay tsy mifototra amin'ny porofo ara-tsiansa.
¿Mety hanimba ary hiteraka homamiadana ny fahita matetika amin'ny radio? Androany dia tsy azo holavina izy io, saingy tsy mitovy amin'ny fanamafisana azy io. Azo aseho amin'ny ho avy koa fa ny fanafody sasany ampiasaina ankehitriny tsy mila dokotera dia manimba, na misy fahazarana sasany heverina ho salama ara-pahasalamana ankehitriny izay tena misy vokany ratsy eo amin'ny fahasalamantsika. Amin'ny siansa ankehitriny izay mety heverina ho marina sy tsy azo iadian-kevitra rahampitso dia mety hirodana, fa manomboka amin'ity dia ny mampitaha ny Apple Watch amin'ny paraky, ary na dia miafara amin'ny filazàna hoe "Tsy avelako hisy ankizy hampiasa Apple Watch mandritra ny fotoana lava" dia betsaka. Tsy ny zava-drehetra no tokony isaina amin'ny asa fanaovan-gazety.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Smartwatches sy ny lainga momba ny fifandraisan'izy ireo amin'ny homamiadana
GTA: Vice City dia mifanaraka amin'ny mpanara-maso iPhone 6 sy MFi